ဆီးချိရောဂါ – Page2– My Doctor
You are here:Home-All Articles-အထွေထွေရောဂါများ-ဆီးချိရောဂါ
By tayzar|2020-01-13T05:29:34+00:00June 11th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအတွက် အကျိုးများစေမည့် အစားအစာများ အရင်တစ်ပတ်က ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့၊ ဆင်ခြင်ပြီး စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေ အကြောင်း ပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေ ဘယ်လိုအစားအစားတွေစားရင် အကျိုးများမလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။ နံပါတ် တစ် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ "အာဟာရ မျှတစုံလင်အောင် စားရပါမယ်"။ အာဟာရမျှတအောင် စားရမယ်ဆိုတာ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဓါတ်ပါဝင်တဲ့ ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဇံတို့အပါအဝင် အခြား ကစီဓါတ်များတဲ့အသီးအနှံတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြောင်းဖူး၊ အာလူး ကန်စွန်းဥ၊ နောက်ပြီး ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မုန့်အမျိုးမျိုး၊ အစားအစာအမျိုးမျိုး၊ အသားဓါတ်ပါဝင်တဲ့ အသား၊ ငါး၊ ဥနှင့် ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဗီတာမင်နှင့်
By tayzar|2020-03-16T05:15:12+00:00June 7th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
သွေးချို ဆီးချိုနဲ့ မျိုးရိုး ဗီဇ သွးချို ဆီးချိုသည် လူမျိုးဘာသာမရွေး ၊အသက်အရွယ်နဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး တောရော မြို့ပါမချန် ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။တစ်စ တစ်စနဲ့ လူနေမှုပုံစံပြောင်း လဲလာမှုတို့ကြောင့် ကမ္ဘာမှာသာမက မြန်မာမှာပါ သွေးချို ဆီးချို ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက် လျက်ရှိပါတယ် ။ စစ်တမ်းများအရတော့ ကမ္ဘာမှာ ၁၀စက္ကန့်တိုင်း လူ ၂ဦး သွေးချို ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနေပြီး စက္ကန့် ၃၀တိုင်းတွင် လူ ၁ဦး သွေးချို ဆီးချိုကြောင့် မသန်မစွမ်း ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ် ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ အဖြစ်ပွားဆုံးဖြစ်ပြီးသွေးချို ဆီးချိုရောဂါသည်တွေရဲ့ ၁၈.၂ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါတယ် ။ အခုလို အဖြစ်များလှတဲ့
By tayzar|2020-03-16T05:23:55+00:00June 7th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးမှာပုရွက်ဆိတ်တက်တာ ဆီးချိုရောဂါရှိနေလို့လား? " ဒီအိမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဆီးချိုဖြစ်နေပြီထင်တယ် " " ဟင်...ဘာလို့လဲ ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့? " " မနက်က အိမ်သာသွားတော့ အိမ်သာထဲမယ်...ရေလောင်းဖို့ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆီးတွေကို ပုရွက်ဆိတ်တွေတက်နေတာတွေ့လို့...ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူး....ဧည့်သည်လည်းလာတာမတွေ့တော့..အိမ်သားထဲက တစ်ယောက်ယောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး...တစ်အိမ်လုံး ဆီးချိုစစ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ " " ဟုတ်လား?သမီးတလောကတင် စစ်ပေးထားတယ်လေ...မေေမေရော ဒေါ်ဒေါ်ရော....ကိုကိုကြီးတို့ မမကြီးတို့ရော...အကုန်ပုံမှန်ပါပဲ....အဲ...ကြီးမေတော့ကျန်သေးတယ်...အဲ့နေ့က အပ်ကုန်သွားတာနဲ့ ကြီးမေစစ်ဖို့ကျန်သွားတာရယ် ...အင်း...ကြီးမေက နဂိုတည်းက သတိမေ့တတ်တဲ့သူဆိုတော့ အိမ်သာရေလောင်းဖို့မေ့သွားတာနေမယ် .....မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး....ကြီးမေကို စစ်ပေးဦးမှပဲ " " ဒေါ်ဒေါ်လည်း ကြားဖူးနားဝရှိလို့သာပြောရတာ....ပုံမှန်လူတွေဆီးကျ ပုရွက်ဆိတ်မတက်ဘဲ ဆီးချိုသမားရဲ့ဆီးကိုမှ ဘာလို့ပုရွက်ဆိတ်ကရွေးတက်ရတာလဲ? ချိုလို့လား? " " အင်းပေါ့ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့...အလွယ်ပြောရရင်....ဆီးချိုဆိုတာ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်များတဲ့ုပြသနာလေ....ဆီးဆိုတာလည်း
Foods to avoid for DM patients
By tayzar|2020-02-17T04:24:47+00:00June 4th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေ ဘယ်လို အစားအစာမျိုးကို ရှောင်သင့်လဲ? ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် မြင့်တက်လျက် ရှိနေပါသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ 425 million က ဆီးချိုဝေဒနာ ခံစားနေရသည်ဟု နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များက ဆိုပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်၊ ကုသရာတွင် အစားအသောက်နှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုဆောင်းပါးတွင် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အစားအစာများကို ပြောပြပေးလိုပါသည်။ (၁) ပြည့်ဝဆီ Saturated fatty acid ခေါ် ပြည့်ဝဆီများသည် နှလုံးကျန်းမာရေးကို များစွာ ထိခိုက်စေသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ (ဖြစ်ပြီးသား ဝေဒနာရှင်တွေမှာလည်း)
Dangers of Hypoglycaemia
By tayzar|2020-03-16T05:33:20+00:00June 1st, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
အသက်နဲ့ရင်းတဲ့ ဟိုက်ပိုသင်ခန်းစာ "ဝမ်း...တူး...ဝမ်း..တူး" ပြည်လမ်းမထက်ဝယ် နုနယ်ပျိုမြစ်သောမိန်းကလေး၏ ခြေလှမ်းတွေက နံနက်မိုးသောက်နေရောင်အောက်မှာ ပြေးလွှားနေသည်။ နံနက်ခြောက်နာရီဆိုရင် နားကြပ်ကိုတပ် အားကစားဝတ်စုံကိုဝတ်ကာ အိမ်မှရွှေတိဂုံဘုရား ရှင်ဥပဂုတ္တရေကန်သို့ joggingပြေးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့သည်မှာ ဒုတိယနှစ်ဆေးကျောင်းသူလေး စုလဲ့အဖို့ အကျင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် မိုးတွင်းဆို စုလဲ့ နားသည်။ မိုးရွာထဲပြေးရင် အခန့်မသင့်က ဖျားတတ်နာတတ်သည်၊ ဒီလိုဆို ကျောင်းပျက်ရင် ပရက်တီကယ် လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေလွတ်သွားမှာကို ကြောက်ရသည်ကိုး။ ဒါကြောင့် မိုးတွင်းပိုင်းနားပြီး ယခုဆောင်းအကူးရောက်မှ ပြန်လည်ပြေးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့က စုလဲ့ ပြန်လည် စတင် joggingပြေးတဲ့နေ့။ ပြေးမယ့်သာပြေးရသည် ညကအိပ်ရေးမဝ။ Candy crushဂိမ်းကို ဆော့ရင်း ဒီလယ်ဗယ်နိုင်မှ အိပ်မကွဆိုပြီး ဆော့လိုက်တာ ညသန်းခေါင်တစ်နာရီကျော်သွားသည်။ ဒီကြားထဲ
By tayzar|2020-03-16T07:17:41+00:00January 3rd, 2018|Categories: All Articles, ကျန်းမာရေး( က-အ ), ကျန်းမာရေး( ဆ ), ကျန်းမာရေး( သ ), စားသောက်မှုပုံစံ, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ဆီးချို သွေးချိုရှိလား ဒါတွေရှောင်စားပါ။ ခေတ်အခြေအနေအရ အစားအသောက်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းစွံအောင် ထုတ်လုပ်ကြရာမှာ အရသာတွေ ပိုကောင်းအောင်သကြား၊ ထန်းလျက်နဲ့ဆားအပြင် တချို့တွေက ဆေးသကြားနဲ့ အချိုမှုန့်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်လို Na ဆိုဒီယမ်ဓါတ်ဆားတွေပါ လွန်လွန်ကဲကဲထည့်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါပြီ။ ထိုအစား အစာတွေနဲ့ အချိုရည်တွေ သိပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ အသက်ရ လာတာနဲ့အမျှအဝလွန်ချင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်လာတဲ့ရောဂါတွေကတော့သွေးတွင်းအဆီတက်ခြင်း၊သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျင်းရောဂါ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါစသည့်ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆီချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပြီးလားဆိုတာကိုအတိအကျသိချင်ရင်တော့(HbAic)``အိတ်ချ်ဘီအေဝမ်းစီ´´ဆိုတဲ့သွေးဓါတ်တစ်မျိုးကိုစစ်ခိုင်းရတယ်။ပုံမှန်သွေးနီဥများက သကြားဓါတ်ကို(3)လအတွင်းစုပ်ယူထားမှှု ကိုစစ်ဆေးတာပါ။ပုံမှန် အိတ်ချ်ဘီအေဝမ်းစီ(6)ပဲအမြင့်ဆုံးရှိရပါတယ်။5.9 သို့မဟုတ်6ထက်ကျော်လာင်္ပြီ ဆိုရင် သင့်မှာဆီချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ခါနီးနေပြီဆိုတာပြနေပါပြီ။အကယ်၍ HbA1c သို့မဟုတ်9ဆိုင်ရင်(ပုံ မှန်6ထက်ပိုများသောပမာဏများ)ဖြစ်တဲ့အတွက် (သို့) သင့်မှာဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်နေကြောင်း4င်းကညွှန်ပြ နေပြီဖြစ်တယ်။အစာမစားဘဲနံနက်လင်းသွေးထုတ်ပြီး ဆီးချိုသွေးချိုစစ်တာကို Fasting